ယနေ့ daily mail သတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည့် သစ်မြစ်တံတားဆောင်းပါးပါအကြောင်းအ
ရာလေးကို လွန်ခဲ့ သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ တွင် ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တင်
ယခုထို သတင်းတွင်ပါရှိသည့် ဓါတ်ပုံများအားထပ်မံထည့် သွင်းကာ အသစ်တစ်ဖန်တင်ဆက်အပ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ.မြောက်ပိုင်းမိုးရေချိန်လက်မအများဆုံးရွာသွန်းသည့် ဒေသတွင်အလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ် ပေါက်ထွန်းတဲ.သစ်ပင်ရဲ.အမြစ်များကနေတံတားပြုလုပ်ဖန်တီးထားတာကိုအခုလိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓါတ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီလိုသစ်ပင်တံတားမျိူးတစ်ခြားဘယ်နေရာမှာမှမရှိပါဘူးတဲ့....
အံ.သြဖွယ်...နှစ်ထပ်သစ်မြစ်တံတား... ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံ ချာရာပါန်ဂျိပြည်နယ်တွင်တွေ.ရသည်။
Ficus elastica အမျိူးနွယ်ဝင်သစ်ပင်များသည်ပင်စည်အထက်ပိုင်းများမှပါသစ်မြစ်များပေါက်သဖြင်.
ကမ္ဘာပေါ်တွင်မိုးရေအစိုစွတ်ဆုံးဒေသဖြစ်သော Cherrapunji ရှိ ၀ါခါစစ် လူမျိူးစုများကရှေးနှစ်
အချိူ.တံတားများမှာလွန်ခဲ.သောနှစ်ပေါင်းများစွာမှယနေ.ထိတိုင် ချာရာပါန်ဂျီ ဒေသ
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်မှ ယနေ့ တိုင် ဘိုးဘွားဘီဘင်များလက်ထက်ကစပြီး
သဘာဝရဲ့ မယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ရာ အံ့သြဖွယ်...
တစ်ချိူ့ သောသစ်မြစ်တံတားများဆိုလျှင် လူပေါင်း အယောက် ၅၀ ကျော် ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား
ရှိပါတသည် ...သစ်မြစ်တံတားတစ်ခုဖြစ်တည်ဖို့ ကတော့ ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိကြာမြင့် နိုင်ပါတယ်...
သဘာဝအတိုင်းပေါက်ကာယှက်နွယ်နေသည့် နွယ်မြစ်များက သစ်မြစ်တံတားကို ပိုမိုခိုင်မာတောင့် 
တင်းစေပါတယ်...သက်ရှိသစ်ပင်၊ သစ်မြစ်တွေဖြစ်တာကြောင့် မို့ လည်း မဆွေးမြေ့ ပဲတည်နေတာမို့ 
သမားရိုးကျ လူတို့ တည်ဆောက်ခဲ့ ကြသည့် တံတားများထက် သက်တမ်းပိုမိုရှည်ကြာပါတယ်...
Posted by peter kyaw | at 10:59 AM |
Labels: / daily mail.co.uk, Photo : General Knowledge
ကြိုက်ပါတယ်. ဗဟုသုတလဲ တိုးစေပါတယ်
ကြိုက်ပါတယ်. ဗဟုသုတလဲ တိုးစေပါတယ်